Halatr’omby tany Maevatanàna : Olona roa voatifitry ny dahalo -
AccueilSongandinaHalatr’omby tany Maevatanàna : Olona roa voatifitry ny dahalo
Halatr’omby tany Maevatanàna : Olona roa voatifitry ny dahalo
Ahazoam-baovao matetika indray ny resaka halatr’omby, indrindra ny any amin’ny faritra. Efa voalaza fa nangina tanteraka tao ho ao izany, ary efa voafehin’ny zandary ny hetsika fanaon’ireo dahalo amin’ny halatr’omby any amin’ny faritra, izao niverina nahazo vahana izao indray. Dahalo nirongo basy FC manodidina ny 30 indray no fantatra fa nanatanteraka fanafihana omby maherin’ny 102 tao amin’ny fokontany Ambohibary kaomina Ambalanja distrikan’i Maevatanana faritra Betsiboka, ny alatsinainy 11 jona lasa teo. Tokony ho tamin’ny 11ora sy sasany alina no nitrangan’ny fandrobana. Raikitra ny fifandonana tamin’ireo dahalo tamin’izany, ka olona roa no namoy ny ainy vokatry ny tifitra, raha lasan’ireo olon-dratsy takalon’aina kosa ny olona miisa efatra tamin’ireo fokonolona. Nidina ifotony tany an-toerana taorian’ny fampandrenesana azy moa ireo zandary, ary nanao ny sakana tamin’ny fanarahan-dia ireo dahalo maro an’isa, izay fantatra fa nirohotra nankany amin’ny Avaratry ny lalana nizoran’izy ireo, raha navelan’izy ireo avokoa ny omby sy ireo olona nalainy an-keriny.